76 vanhu vakaurayiwa muMogadishu kutyisidzira
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » mhosva » 76 vanhu vakaurayiwa muMogadishu kutyisidzira
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Hurumende Nhau • nhau • chengetedzo • Somalia Kuvhuna Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Vanosvika makumi manomwe nevatanhatu vanhu, kunyanya vanhuwo zvavo, vakaurayiwa uye vanosvika makumi mapfumbamwe vakakuvadzwa mukati SomariaGuta guru reMogadishu nemugovera, bhomba yerori payakaenda kunzvimbo yekutarisa.
Kuputika kukuru uku kwakaparadza bhazi rakazara nevadzidzi kubva kuYunivhesiti yeBenadir.
Paivewo nemishumo yekudzimisana moto pakati pevachengeti nemauto echiIslam panzvimbo yekutarisa kusati kwatanga.
Sekureva kweMogadishu ambulensi sevhisi, vanhu vanosvika makumi manomwe nevatanhatu vakafa mukuputika uku. Vakuru vemakanzuru vakambotaura kuti vanhu makumi mashanu vakaurawa uye vakayambira kuti huwandu hwevakafa hungangokwira nekuda kwenhamba yakakura yekukuvara kwakanyanya.
Vanoda kusvika makumi mapfumbamwe vanhu vakakuvara, sekureva kwevakuru.
Sekureva kwemamwe mareport, anopfuura gumi nemaviri mapurisa ari pakati pevakauraiwa.
Mapurisa eMogadishu akati varwisi vacho vakanangana nehofisi yekuunganidza mutero, iri padyo nenzvimbo yekutarisa.
Hapana boka rakati rakakonzera chiito chemagandanga kusvika parizvino. Kurwiswa kwakadai muSomalia kazhinji ibasa reAl-Qaeda-rakabatana-jihadist boka reAl-Shabaab.